Peppermint OS 9: mugove wakanangidzirwa kune-gore-based application | Kubva kuLinux
Izvo zvinogoneka uye zvinenge zviripo kuti vazhinji vevaverengi veiyi blog vakatonzwa nezvazvo Peppermint OS kana kuti ivo vakatomboishandisa pane imwe nguva kana zvakanakisa pane zvese zvavanoishandisa ikozvino.
Asi kune avo vasati vaziva kugoverwa kweLinux, isu ticha tora mukana wechinyorwa chino kuti tikwanise kutaura zvishoma nezvazvo. Kune akawanda Ubuntu-akavakirwa kugovera, imwe neimwe yakanangana kune rakatarisana basa kana desktop desktop.
Nezve Peppermint OS
Peppermint OS ndeimwe yeanogoverwa, kunyangwe, kusiyana nevamwe, uku ndiko kugovera kunobva pane imwe yeanhuvira eUbuntu anova Lubuntu.
Naizvozvi isu tinogona kutanga kupa pfungwa yemabatiro ainoita. Peppermint OS ndeyekureruka kugoverwa kweLinux, yakavakirwa paMozilla's Prism tekinoroji.
Ndeipi inopa kugovera kugona kwekubatanidza web-based application. Nenzira iyi Peppermint OS inounzwa senge imwe nzira kune gore-based masisitimu senge Chrome OS.
Kugoverwa uku kune hybrid system, sekutaura, nekuti zvinotibvumidza kuve nekubatanidzwa kwewebhu webhu mune ino system, pamwe neazvino zvikumbiro zvinogona kuiswa pane iyo Linux system.
Nenzira iyi vashandisi vekugovera vanogona kuchengetedza huwandu hwezviwanikwa, sezvo mawebhusaiti ekushandisa achiitwa padivi reseva uye chete mutengi (Peppermint OS) ndiye anoona nezvekuzviita pasina kushandisa zviwanikwa zvinosanganisira izvi.
Kugoverwa kweLinux ine chishandiso chayo chinonzi Ice, nayo chaizvo zvazvinokutendera kuti uite kutora chero webhusaiti nerubatsiro rwewaunofarira web browser uye woishandura kuita webhu kunyorera.
2 Dhawunirodha Peppermint OS 9
Parizvino kugovera Peppermint OS 9 iri mune yayo yazvino vhezheni yakagadzikana iyo inouya yakashongedzerwa neXfce uye LXDE desktop nharaunda uye Iyo yakavakirwa pane yazvino vhezheni yakagadzika yeUbuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver), zvinoreva kuti ine rutsigiro kwemakore mashanu.
Kusiyana nezvimwe zvinogoverwa uye sezvakataurwa, iyi distro inotarisana nekuve kugovera kwechiedza saka Iyo ine shanduro dze32-bit uye 64-bit makomputa.
Iyi poindi inoipa iyo yekuwedzera, sezvo mazhinji ekuparadzira kunoenderana neUbuntu achingoenderera mberi nekusimudzira kune makumi matanhatu neshanu dhizaini, sezvo ivo vakasarudza kusiiwa kweiyo 64-bit kuvaka.
Ichi chitsva vhezheni inouya neKernel 4.15.0-23 uye Nemo faira maneja iyo inouya mushanduro 3.6.5, inosanganisira mitezo mitsva yeGTK uye maererano ne interface pane zvakawanda zvakagadziridzwa.
Munzvimbo yedesktop, xfce4-screenshooter yakagamuchirwa, chinova chishandiso chitsva kutora skrini.
Zvakare kucherechedzwa inyaya yekuti matekinoroji anotsigira mapakeji Flatpak uye Snap kuburikidza nemapakeji kubva kuGNOME software chiteshi, izvo zvino zvinoonekwa mune huru menyu
Htop ikozvino inewo yayo menyu uye inowanikwawo mune iyi vhezheni. Panyaya yebrowser Mozilla Firefox yakatsiviwa neiyo Chrome webhu browser, ino yave itsva default browser mukugovera.
Uye pakupedzisira tinogona kumira pakati pezvimwe zvikumbiro zvatinogona kuwana mukugovera, pakati pazvo zvatinogona kuwana mune iyi vhezheni itsva:
Gwaro rinoona, Gmail, Google Calendar, Google Drive
Mozilla Firerefox, Dropbox, BitTorrent mutengi, ICE
Pixlr mupepeti, Pixlr Express, muoni wemifananidzo, yakapusa scan, skrini
GNOME Mplayer 1.0.8 Media Player, Guayadeque mumhanzi mutambi
Archive maneja, karukureta, kutsvaga kwefaira, chinongedzo, gedit mameseji edhitaivhi, maneja weprinta, maneja weBluetooth
Dhawunirodha Peppermint OS 9
Kana iwe uchida kudhawunirodha iyi vhezheni itsva yekuparadzira, unogona kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana iyo system mufananidzo, iyo iwe yaunogona kushandisa pakombuta yako kana mumuchina chaiwo kana iwe uchida. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Peppermint OS 9: kugovera kunotungamirwa kune-based-based application
Ini ndaiziva system asi ini ndaisaziva kuti yaitei zvese izvo. Kunze uko kwakakodzera kuyedza. Gadzira posvo nezve Ice, iyi application inonzwika seinonakidza.
4 Linux distributions yakagadzirirwa kutamba mazita ako aunofarira pavari